‘रवि’ खरानी धेरै धस्ने नयाँ साधु, ‘गिरिराजमणी’ विहे नगर्ने मान्छेः दुर्गा प्रसाई « Dainik Online
‘रवि’ खरानी धेरै धस्ने नयाँ साधु, ‘गिरिराजमणी’ विहे नगर्ने मान्छेः दुर्गा प्रसाई
प्रकाशित मिति : १० असार २०७९, शुक्रबार १ : ४५
काठमाण्डौँ । मुखमा जे आयो, त्यो बोलेर विवादमा आउने एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले फेरि विवादमा आउने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, काठमाण्डौँ।धरानका मेयरद्धय बालेन साह, हर्क साम्पाङ, नयाँ दल खोलेका रवि लामिछाने, पार्टी छोडेका रविन्द्र मिश्र, डाक्टर गोविन्द केसीमाथि अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाएर विवादमा मुछिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
प्रसाई पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पोख्रेलको ब्यक्तिगत जीवनभित्रै छिरे । उनले पोख्रेललाई अझैसम्म विहे नगरेको भनेर कन्ट्रोभर्सी कुरा गरे । यो देशको स्वास्थ्य र शिक्षा बिगार्ने मान्छे गिरिराज भएको उनले आरोप लगाए ।
यस्तै डा. गोविन्द केसीलाई प्रसाईले यो देशको अपराधी भन्न भ्याए । यो देशका मेडिकल कलेज बन्द गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई अरुको देशमा पठाउने अपराधी केसी भएको उनले आरोप लगाए ।
नयाँ दल खोलेर चर्चामा आएका रवि लामिछानेलाई प्रसाईँले खरानी धेरै धस्ने नयाँ जोगीको नाम दिए । रविप्रति इंगित गर्दै उनले भने ‘नयाँ साधुले धेरैले खरानी घस्छ । उहाँले आजसम्म कतिलाई रोजगारी दिनुभयो ?उहाँ नैतिकतामा कति बस्नु भयो ? उहाँले गरेका सबै कुरा अब ओझेलमा पदैनन् । उहाँ राजनीतिमा आउनुपर्छ तर स्वास्थ्य, शिक्षामा के गर्नु भएको छ ? रवि मुख छोड्ने मान्छे हुन् । अर्कालाई मुख छाडेर चर्चामा आएका ब्यक्तिले देशलाई के गर्नु ? ‘उनले भने ‘म काम गरेर दुवै पुगेँ, कसले के दिन्छ कसले लौरो दिन्छ, उहाँलाई कसले के दिने ? राजनीति गर्न सजिलो छैन । एकै रातमा राजपरिवार सिद्धिने देश हो यो ।’
यस्तै उनले नारायणकाजीलाई माओवादी सिध्याउने ब्यक्ति भनेका छन् भने बालेन र हर्कहरुकोबारेमा पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।